इजरायल द्वा`रा कोरोना संक्र`मण विरु`द्धको भ्या`क्सिन तयार पारेको दाबी !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/इजरायल द्वा`रा कोरोना संक्र`मण विरु`द्धको भ्या`क्सिन तयार पारेको दाबी !!
एजेन्सी- इजरा`यलले विश्व`व्यापी महा`मा-रीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस स‌क्र`मण विरु`द्धको भ्या`क्सिन तयार पारेको दाबी गरेको छ । इजरायलका रक्षा मन्त्री नेफ्टली बेनेटले कारोना भाइरसको भ्या`क्सिन तयार गरेको दावी गरेका हुन् ।
उनका अनुसार इजरायल इन्टिच्यूट फर बायोलो`जिकल रिसर्च (आई.आई.बी.आर.) ले भ्याक्सिन तयार गर्नमा सफलता हासिल गरेको छ । यो म`हामा`रीसँग लड्न मिल`लाई पत्थ`र सावित हुनेछ । बेनेट सोमबार इन्टि`च्यूट पूगे`का थिए ।
रक्षा मन्त्री बेनेटले भने- आई..आई.बी.आर.का शोध कर्ताले कोरो`नाको एन्टि`बडी विकसित गरेका हुन् । यो एन्टिब`डी मोनो`क्लोनल तरि`काबाट भाइरस`माथि हम`ला गर्दछ र त्यस`लाई शरीर भित्रै मा`र्नमा सक्ष`म छ । भ्या`क्सिन विकास`को चरण अब पूरा भएको छ ।
बेनेटले भने, ‘एन्टि`बडी फर्मू`लाको पे`न्ट गरिँ`दैछ । यस`पछि अन्तर्रा`ष्ट्रिय कम्पनी`सँग व्यवसा`यिक स्तरमा यसको उत्पा`दनको लागि सम्प`र्क गरिने`छ । हामी लाई यो सफल`ताको लागि इन्टि`च्यूटका कर्मचा`री प्रति गर्व छ ।’तर उनले यो भ्याक्सि`नको परीक्ष`ण मानवमा भयो कि भएन भनेर स्पष्ट पारेका छैनन् ।
ताजा खबर बाट साभार गरिएको(etajakhabar.com)